मधुमेह रोग ठिक पार्ने अचूक औषधी जामुनको उपयोगिता
जामुनको स्वाद मिठो हुन्छ । जामुनलाई अंग्रेजीमा ब्ल्याकबेरी (Black Berry) नामले पुकार्ने चलन छ । आजकाल हरेक घरमा सुगर (Blood Sugar) रोग भएकाले सुगरमा जामुनलाई महत्वपूर्ण औषधिको रूपमा मानिएको छ । काचो भएमा हल्का टर्टो र पाके पछि मिठो हुन्छ । अधिकांश वैद्यहरूले यस्को बोक्रा फालेर दानालाई पिसेर पाउडर बनाएर मधुमेहको रोगीलाई दिदा ठिक हुने कुरा लेखेको छ । तर यो गलत व्याख्या गरिएको छ । यसरी बनाएको औषधिमा गुण न्युन हुनसक्छ ।
जामुनको फल सुकाउने र पिसेर पाउडर बनाएर प्रयोग गरेमा मधुमेहको दोहोलो गर्छ भन्ने कुरा आयुर्वेदिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई आफ्नो खानमा नियमित रुपमा खादा निकै फाइदा हुन्छ । जामुनको फलमा पाइने केही रसायनले रगतमा सुगर लेवल नियन्त्रण गर्न धेरै काम गर्छ ।
जामुन मौसमी फल भएको कारण यो सधैँ पाउन सकिँदैन । तर पाकेको जामुनको फल जम्मा गरेर सुकाएर राखेमा अन्य मौसममा औषधिको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सहयोग पुग्नेछ । जामुन जति स्वादिलो हुन्छ, त्यति नै यसका औषधीय गुणहरुले पनि यो पूर्ण रहेको पाइन्छ ।
१. सुगरका रोगीले काचो जामुनको सिजनमा काँचो र पछि सुकेको जामुनलाई माटाको भाडामा १ केजी जति २ पाथी जति पानीमा भिजाएर राख्ने २,३ दिनपछि विहान बेलुका जामुनको पाउडर एक चमच एक गीस रसमा हालेर नियमित सेवन गर्ने सुगर लेवल कम हुदै जानेछ ।
४. जामुनले शरीरको पाचनशक्तिलाई बढाउनका साथै यसले पेट सम्बन्धी विकारहरुलाई कम गर्दछ ।
नोट : हाम्रो जगलमा र घरवरिपरि यस्ता थुप्रै औषधीय गुणहरुले भरिपूर्ण जडिबुटी छन्, त्यसको समुचित प्रयोगले हाम्रो स्वास्थ्यको रक्षा गर्न सकिनुका साथै अनावश्यक खर्चबाट आफुलाई बचाउन सकिनेछ ।
रोगबाट बच्न घर-घरमा तुलसी, निम, पिपल, बर, असुरो र स्वामी जस्ता बोटबिरूवाहरु रोपौ
मानव स्वास्थ्यको लागि ज्वानोको प्रयोगका चमत्कारीक फाइदाहरु